विमानका पुरुष यात्रुले महिला यात्रुको सीटमा पिसाव गरिदिएपछि…. – Saurahaonline.com
विमानका पुरुष यात्रुले महिला यात्रुको सीटमा पिसाव गरिदिएपछि….
एक जना पुरुषले एयरइन्डियाको विमानमा महिलाको सीटमा पिसाव गरिदिएका छन् । इन्द्राणी घोष नाम गरेकी महिलाले आरोप लगाएकी छिन् कि ३० अगस्टमा न्यूयोर्कबाट दिल्लीतर्फ आइरहेको एयर इन्डियाको फ्लाइटमा नशामा रहेका एक व्यक्तिले उनकी आमाको अगाडि पाइन्ट उतारेर सीटमा पिसाव गरिदिएको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्चामा छ ।
एयरइन्डिायाको ट्वीटरमा भनिएको छ कि उसले सबै सम्बन्धित विभागमा घटनाको जानकारी पठाएको छ र क्याविन क्रुसँग रिपोर्ट माग गरिएको छ । महिलाले यो घटनाको जानकारी ट्वीटरमा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुरेश प्रभु र एयर इन्डियालाई दिएकी छिन् । घटना रातिको समयमा भएको थियो ।
घटनापछि आरोपी व्यक्तिलाई आरामसँग विमानस्थलबाट निस्कन दिइएको थियो र उसमाथि कुनै कारवाही भएको थिएन् । आमालाई अर्को सीटमा बस्ने व्यवस्था बाहेक विमानका कर्मचारीले केही नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन् ।
उनका अनुसार उनकी आमा एक्लै यात्रा गरिरहेकी थिइन् । न्यूयोर्कमा बस्ने ती महिला पेशाले योगा प्रशिक्षक तथा वकिल हुन् । उनका अनुसार यो घटनाले आमालाई निकै दुखित् बनाएको छ ।